आज वर्षकै सबैभन्दा लामो दिन, यस्तो किन हुन्छ ? - Kantipath.com
आज यो वर्षको सबैभन्दा लामो दिन हो यसको अर्थ घण्टाको हिसाबले सबैभन्दा लामो घण्टाको दिन आज हुनेछ । तपाईं यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि रात सबैभन्दा छोटो हुनेछ ।
यसलाई अंग्रेजीमा समर सोल्स्टिस पनि भनिन्छ । आखिर यस्तो किन हुन्छ ? यसबारे थाहा पाउन तपाईंलाई मन लागेको हुनसक्ला ।
हामीलाई थाहा छ कि पृथ्वी आफ्नो कक्षमा सूर्यको चक्कर लगाउँछ र कक्षमा पृथ्वीको स्थितिका अनुसार दिन र रात निर्धारण हुन्छ । अर्थात्, २१ जूनमा सूर्यको चक्कर लगाउँदै पृथ्वी यस्तो स्थितिमा हुनेछ, जहाँ धेरै बेरसम्म सूर्यको किरण पृथ्वीमा पर्नेछ ।
साधारणतया हरेक वर्ष २० जूनदेखि २२ जूनको बीचमा एउटा यस्तो दिन हुन्छ, जुन समयावधिको हिसाबले सबैभन्दा लामो दिन हुन्छ । यस वर्ष यो दिन २१ जून अर्थात् आज परेको छ ।
२१ जून पछि नै दिन छोटो हुन थाल्छन् र रात लामो हुन थाल्छ । २१ सेप्टेम्बरमा रात र दिनको अवधि लगभग बराबर हुनेछ र २१ डिसेम्बरमा वर्षको सबैभन्दा छोटो दिन र सबैभन्दा लामो रात हुनेछ । उत्तरी गोलार्द्धका देशमा यसलाई विन्टर सोल्स्टिस भनिन्छ तर दक्षिण गोलार्द्धका देशमा यो समर सोल्स्टिस हुनेछ । बिबिसीबाट
Previous Previous post: नेपालमा कोरोनाको थप एक भेरियन्ट फेला : सचेतता अपनाउन आग्रह
Next Next post: स्थानीय सरकारको योजना तर्जुमा प्रक्रिया माध्यान दिनुपर्ने विषय तथा सुझाबहरु !